Shiinaha warshad waaxda wax soo saarka warshadaha Shiinaha iyo soosaarayaasha | Zhenyuan
Warshadda warshadaha: waxaa loola jeedaa dhammaan noocyada dhismayaasha sida tooska ah loogu isticmaalo wax soo saarka ama taageeridda wax soo saarka, oo ay ku jiraan aqoon isweydaarsiyada waaweyn, dhismayaasha kaabayaasha ah iyo xarumaha wax lagu barto. ilaa aqoon isweydaarsiyada loo isticmaalo wax soo saarka, dhirta warshadaha sidoo kale waxaa ku jira dhismayaasha dhaxalka.
Aqoon isweydaarsiga warshadaha waxaa loo qaybin karaa dhisme warshadeed hal dabaq ah iyo dhisme warshado dhowr dabaq ah leh iyadoo loo eegayo nooca qaabdhismeedka dhismaha.
Inta badan dhismayaasha warshadaha dabaqyada badankood waxaa laga helaa warshadaha iftiinka, korantada, qalabka, isgaarsiinta, daawooyinka iyo warshadaha kale. Dabaqa noocan ah guud ahaan ma aha mid aad u sarreeya, naqshadeynta nalkiisuna wuxuu la mid yahay dhismayaasha shaybaarka cilmi baarista cilmiyeed ee caadiga ah, badankooduna waxay qaataan qorshooyinka laambadda nalalka. dhismayaasha warshadaha, sida ku xusan baahiyaha wax soo saar, inbadan oo iyaga kamid ah waa warshado warshado hal-dabaq ah oo dhowr-dabaq ah leh, taas oo ah, dhir kala-ballaadhan oo is-barbar socda oo is barbar socda. Taako kasta waxay noqon kartaa mid la mid ah ama ka duwan wixii loo baahan yahay.
Ballaca (taako), dhererka iyo dhererka dhismaha warshad hal dabaq ah ayaa lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo shuruudaha tikniyoolajiyadeed ee ku saleysan la kulanka shuruudaha dhismaha qaarkood. Dhererka dhirta B: Guud ahaan 6, 9, 12, 15, 18, 21 , 24, 27, 30, 36m ....... Dhererka aqoon isweydaarsiga L: ugu yaraan daraasiin mitir, boqolaal mitir badan. Dhererka geedka H: kan ugu hooseeya guud ahaan waa 5 ~ 6m, iyo kan sare wuxuu gaari karaa 30 ~ 40m, ama ka sareeya. Fiditaanka iyo dhererka aqoon isweydaarsiga ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu tixgeliyo nalka nashqada aqoon isweydaarsiga. Intaas waxaa sii dheer, iyadoo la tixraacayo sii socoshada wax soo saarka warshadaha iyo baahida gaadiidka wax soo saarka u dhexeeya qaybaha, dhirta warshadaha badankood waxaa lagu qalabeeyaa wiishashka, kuwaas oo qaadi kara culeysyada fudud ee 3 ~ 5t iyo kuwa waaweyn oo boqolaal tan ah.
Heerka naqshadeynta aqoon isweydaarsiga warshadaha wuxuu ku saleysan yahay qaab dhismeedka aqoon isweydaarsiga, naqshadda aqoon isweydaarsiguna wuxuu go'aamiyaa qaabka aqoon isweydaarsiga iyadoo loo eegayo baahida habka farsamada iyo xaaladaha wax soo saar.
Qeexitaanka naqshadeynta dhirta caadiga ah
1. Naqshadeynta dhirta warshadaha waa in lagu fuliyaa iyadoo la raacayo siyaasadaha iyo tilmaamaha la xiriira ee Gobolka, tiknoolajiyad ahaan horumarsan, dhaqaale ahaan macquul ah, lagu dabaqi karo si nabadgelyo leh, loo hubinayo tayada, lana waafajinayo shuruudaha ilaalinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka.
2. Qeexitaankani wuxuu khuseeyaa naqshadeynta dhirta warshadaha ee dhowaan la dhisay, dib loo dhisay ama la ballaariyay, laakiin ma aha qolka nadiifka ah ee bayoolojiga leh bakteeriyada oo ah shayga xakamaynta. Qodobbada Xeerkan ee khuseeya ka hortagga dabka, daad gureynta iyo goobaha dabka lagula dagaallamayo ma khuseeyaan naqshada dhirta warshadaha dhaadheer iyo dhirta warshadaha ee dhulka hoostiisa oo leh dhisme dhererkiisu ka badan yahay 24 mitir.
Qodobka 3 marka dhismaha asalka ah loo isticmaalo isbeddelka tikniyoolajiyadda nadiifka ah, nashqadeynta aqoon isweydaarsiga warshadaha waa in lagu saleeyaa shuruudaha habka wax soo saarka, loo hagaajiyaa tallaabooyinka iyadoo la raacayo xaaladaha maxalliga ah, loola dhaqmayo si ka duwan, iyo in si buuxda loo isticmaalo xarumaha farsamada ee hadda jira.
Naqshadeynta aqoon isweydaarsiyada warshadaha waa inay abuurtaa shuruudo lagama maarmaan u ah dhismaha, rakibaadda, dayactirka, maaraynta, tijaabinta iyo hawlgal ammaan ah.
Naqshadeynta warshad warshadeed waxay u hoggaansameysaa shuruudaha ku habboon ee heerarka qaranka ee hadda jira iyo qeexitaannada marka lagu daro hirgelinta xeerkan.
Lix, warshadda warshaduhu waxay ka kooban tahay dhisme madax-bannaan (aqoon-isweydaarsi), iyo dhisme madax-bannaan (jiif), masaafada u dhexeysa labada dhisme waa 10 mitir, tan ugu dhow oo aan ka yarayn 5 mitir, si looga takhaluso aqbalaadda dadka aqoonta leh Qiyaasta sagxadda dhulka iyo aagga dhismaha waa 1: 3.
Qeybta Warshadaha Warshadaha
Sare u qaadka dhismaha Warshadda
Qorshaha dogob Crane
Guud ahaan jaantuska qaabka 3D ee qaab-dhismeedka birta
Qaab dhismeedka saqafka
Qaab-dhismeedka sare ee birta Sawirka 1
Qaab dhismeedka biraha birta ah Sawirka 2
Sawir adag oo ah qaabka guud ee birta
Hore: Naqshadaynta Villa
Xiga: Kheyraadka Aadanaha Iyo Naqshadeynta Naqshadeynta
Naqshadeynta Qaab-dhismeedka Birta Warshadaha